घुम्ने होइन त ? स्टिमरमा सरर… – Vishwanews.com : Popular Nepalese News Media in New York, USA
Home / News / प्रवास / घुम्ने होइन त ? स्टिमरमा सरर…
घुम्ने होइन त ? स्टिमरमा सरर…
भदौ । व्यस्त जीवनकाबीच रमाइलो गर्ने अवसरका रूपमा एक नेपाली युवा उद्यमी विकास केसीले सस्तो र सहज रूपमा स्टिमर सयरसम्बन्धी व्यवसाय थालनी गरेका छन् । सिड्नीको चर्चित क्रोनोलाको टंकिन स्ट्रिटमा अवस्थित वेबाट प्रारम्भ हुने समुद्री सयर करिब चार घन्टाको हुनेछ । नेपाली उद्यमीले पहिलोपटक सिड्नीको सामुद्रिक पर्यटन क्षेत्रमा हात अगाडि बढाएका हुन् ।
नेपाली समुदायलाई लक्षित गरेर प्रारम्भ गरेको यस व्यवसायले सस्तो र सुलभ रूपमा उत्कृष्ट मनोरञ्जन प्रदान गर्ने उद्यमी विकासले बताए । मात्र ८० डलरमा चार घन्टाको सामुद्रिक यात्रा र खाना तथा पेयपदार्थसमेत उपलब्ध गराइने सो यात्रा निकै रोचक रहनेछ । अस्ट्रेलियामा नेपाली समुदायको बढ्दो उपस्थितिसँगै बिदामा रमाइलो गर्ने संस्कार बढ्दै गएको अवस्थामा यस व्यवसायले नेपालीहरूलाई थप मनोरञ्जन प्रदान गर्ने विकास बताउँछन् । आफ्नो निजी सवारीसाधन, बस अथवा ट्रेनमार्फत सहजै पुग्न सकिने क्रोनोलाको टंकिन स्ट्रिटबाट चार घन्टाको यात्रा निकै रोमान्चक हुने सञ्चालकको ठम्याइ छ ।
सो स्टिमर यात्रा यही अगष्ट ३१ तारिखदेखि प्रारम्भ भएको हो । स्टिमरको शुभारम्भमा सिड्नीका सञ्चारकर्मी तथा केहि उद्यमीहरूकोसमेत उपस्थिति थियो । शिक्षा क्षेत्रमा लागिपरेका व्यवसायी प्रदीप ढकाल, एनआरएनए अस्ट्रेलियाका पूर्वअध्यक्ष गणेश केसी, युवा व्यवसायी दीपक भट्टराईलगायतको उपस्थिति रहेको थियो । सस्तो र रमाइलो वातावरणमा करिब चार घन्टाको सामुद्रिक यात्रा रोचक र अत्यन्तै रमाइलो रहेको सहभागीहरूले बताए । वे र बिचको संगमका रूपमा रहेको सो क्रोनोलाको चारघण्टे यात्रामा सबै नेपालीलाई स्वागत गर्न आफू आतुर रहेको युवा उद्यमी विकास केसीले बताए ।